Mukati meHarare Moberekera Ingwe
Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka muHarare mapurisa achikanda zvombo zvehutsi hunokachidza ukuwo zvitoro zvizhinji nemahosifi mumimigwagwa inoti First, Jason Moyo naNkwame Nkrumah, zvichivharwa sezvo mapurisa ange ave kurwisana neveruzhinji.
Bongozozo ratanga mangwanani eChina apo mapurisa akanda masipaiki pakombi yange yakatakura vanhu ikaita tsaona pakakuvara vana vechikoro.
Chiitiko ichi chatsamwisa vanhu vakwanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi varova mapurisa uye vanonzi vange vave kuda kutorera mapurisa ari muguta masipaiki vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakakonzeresa muchokoto muguta.
Mumwe wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaDenford Ngadziore, vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDeed Office muna Nkwame Nkrumah uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu aya hutsi hunokachidza.
VaNgadziore vati zvitiko zviviri izvi zvatsamwisa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
Nenguva dzezuva ronyura neChina, mapurisa anga achiri kukanda hutsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahosfisi kana muzvitoro mavakavharirwa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yema spike iyo vanhu vanogara chema nayo zuva nezuva.
Asi sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika, VaRonald Muderedzwa, vati havana chavanoziva pachiitiko ichi uyewo vati apo komiti yavo yakatenderera nenyika svondo rapfuura, havana kubvunza nezvenyaya yemasipaiki nekuti yaive mumatare edzimhosva.
Nyonga nyoga yaitika muHarare yaitika apo gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vange vachiudza musangano mukuru wokuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzehupfumi.
Asi vamwe vapinda mumusangano uyu vati VaChinamasa vakarashika nekuti kuita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzehupfumi.
Mukuru weYouth Forum ,VaWellington Zindove, vaudza Studio 7 kuti hupfumi hwenyika haubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu.
Vakawanda vari kupinda mumusangano uyu wemazuva maviri wakarongwa neChartman House, Sapes Trust, Crisis in Zimbabwe Coalition neNED vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remitemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzehupfumi.